CodeCheck: Food & Cosmetics Scanner 5.2.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
Application မ်ား က်န္းမာေရး & ႀကံ႕ခိုင္ေရး CodeCheck: Food & Cosmetics Scanner
CodeCheck: Food & Cosmetics Scanner ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဒါဟာကျန်းကျန်းမာမာနဲ့သတိစားသုံးမှုမှကြွလာသောအခါ CodeCheck သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစျေးဝယ်လက်ထောက်ဖြစ်ပါတယ်🕵️-။ ရိုးရှင်းစွာဘားကုဒ်ကိုသို့မဟုတ်သင့်အစားအစာ Ean အရေအတွက်ကို🥗သို့မဟုတ်အလှကုန် scan 💄့စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းသင်ထုတ်ကုန်, သက်သတ်လွတ်သက်သတ်လွတ်သို့မဟုတ် gluten- သို့မဟုတ် Lactose ကို-အခမဲ့ရှိမရှိထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သူတို့ပါဝင်နေလျှင်ထို့အပြင်: စသည်တို့ဆီအုန်း, microbeads, nanoparticles, parabens, paraffins လွန်းသကြား, သငျသညျအရာတစ်ခုခုတစ်ခုတည့်မှုရှိပါက .. CodeCheck လည်း, သင်ကူညီပေးသည်။ ယခုတွင်သင်သည်လည်းအကောင်းဆုံးသင် fit မှ CodeCheck စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့တစ်ဦးချင်းလိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီး, သင်ထုတ်ကုန်သင်တို့အဘို့သင့်လျော်သည်ဟုတ်မဟုတ်ကိုပြသသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး rating စက်ဝိုင်းကိုငါပေးမည်။ သငျသညျ gluten ဘို့ဒါမှမဟုတ်ထုတ်ကုန်⚠️သက်သတ်လွတ်သို့မဟုတ်သက်သတ်လွတ်သို့မဟုတ်မပါလျှင်, သတိပေးချက်များသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သင်အမြဲလည်းပိုကောင်းအခြားနည်းလမ်း၏အကြံပြုချက်များလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ သို့သော် CodeCheck ့ထုတ်ကုန်ကင်နာနှင့် smart စျေးဝယ်လက်ထောက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအစတစ်ဝီကီနှင့်သတင်းစာကျွေးမယ့် - အားလုံးတဦးတည်း app ထဲမှာ💪!
အခမဲ့ app ကို Download လုပ်ပါသို့မဟုတ်အခမဲ့ကြော်ငြာပရီမီယံဗားရှင်း subscribe
Login လေးယောက် profile များကိုတစ်ဦးကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်တည်ဆောက်။
နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခု vegan-, vegetarian- သို့မဟုတ် gluten-သတိပေးချက်စိတ်ကြိုက်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သတိပေးချက်များလက်ခံရရှိရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ခြင်းနှင့်အစားအစာပေါ်အခြေခံပြီးသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကို customize ။
စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ပြီးနောက်ရိုးရှင်းစွာပိုပြီးသင့်လျော်သောအခြားနည်းလမ်းပြသခံရဖို့ scroll down ပါ။
ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သော Greenpeace, Bundeli (ကမ္ဘာမြေဂျာမဏီ၏သူငယ်ချင်းများ), အ WWF, အစားအစာစံနှုန်းများအေဂျင်စီနှင့် Verbraucherzentrale ဟမ်းဘတ်, Verbraucher Initiative e.V. တူသောစားသုံးသူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအလောင်းတွေအဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံနည်းကျတွေ့ရှိချက်သို့မဟုတ်လွတ်လပ်သောကျွမ်းကျင်သူထင်မြင်ချက်များကိုလိုက်နာ နှင့် Stiftung သားမွေး Konsumentenschutz ။ ratings များအတွက်ရည်ညွှန်းထားသောအဆိုပါသတင်းရပ်ကွက်များကအစဉ်အမြဲအသီးအသီးပါဝင်ပစ္စည်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနေကြသည်။
သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းမပါသလဲ? ထိုအခါအဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CodeCheck အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုတက်ကြွအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာဘေ့စသို့ထုတ်ကုန်များနှင့်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ပါဝင်ပစ္စည်းများဝင်မဟုတ်လော ကျွန်ုပ်တို့၏ algorithm ကိုပြီးရင်ချက်ချင်းသက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်သက်ဆိုင်ရာ ratings ဤလင့်ထားသည်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်း feed ကိုစိတ်ကူးအကြံပေးချက်များ, သက်သတ်လွတ်သို့မဟုတ် gluten-အခမဲ့ချက်ပြုတ်နည်းများ👨🍳နှင့်ပိုပြီးကမ်းလှမ်းမှတပါးသင်တို့ရှိသမျှသည်သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျ CodeCheck တစ်ခုအခမဲ့ကြော်ငြာဗားရှင်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ သငျသညျ CodeCheck အခမဲ့ကြော်ငြာဝယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ပါကသင်၏ Play-Store တွင်အကောင့်မှတဆင့်ပြုမိပါလိမ့်မည်။
သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကို, requests သို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါက support@codecheck.info မှာကျွန်တော်တို့ကိုစာရေးဆက်သွယ်ပါ!
သငျသညျ CodeCheck ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား? သို့ဆိုလျှင်ကျွန်တော်တစ်ဦးအပြုသဘော★★★★★ rating ကြိုဆိုပါ၏! ငါတို့သည်သင်တို့ကျန်းမာ, ရေရှည်တည်တံ့လမ်းအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောအချိန်စျေးဝယ်များမျှော်လင့်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ CodeCheck ရေးအဖွဲ့
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/codecheck.info.de
Instagram ကို: https://www.instagram.com/codecheck_info/
CodeCheck: Food & Cosmetics Scanner အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
CodeCheck: Food & Cosmetics Scanner အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
CodeCheck: Food & Cosmetics Scanner အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
CodeCheck: Food & Cosmetics Scanner အား အခ်က္ျပပါ
niggi စတိုး 20 18.95k
CodeCheck: Food & Cosmetics Scanner ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း CodeCheck: Food & Cosmetics Scanner အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Mopper AB
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.codecheck.info/ueber-uns/datenschutz
လက်မှတ် SHA1: 5B:61:A9:C1:03:64:05:A2:05:A8:D4:62:70:50:96:72:9F:0A:19:CE
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Gilad Geron
အဖွဲ့အစည်း (O): ETH Zurich
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Zurich
CodeCheck: Food & Cosmetics Scanner APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ